ညီနေမင်း: Gtalk နဲ့ ဟန်းဖုန်းကိုခေါ်ကြမယ်လေ (နောက်တစ်နည်း)
no catches, no limits, and no conditions! လို့ သူတို့က ဆိုထားပါကြောင်းခင်ဗျား။
ဒီ service လေးကို သုံးဖို့ တဘက်လူမှ Caller ID ကိုဖွင့်ထားပေးဖို့လိုပါမယ်။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ တဘက်ကလူကို အဲဒီ service မှ မှတ်မိသိရှိပြီး ဆက်သွယ်ပေးနေတာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။
login တွေ password တွေမလိုတဲ့ လွယ်ကူစွာ ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။
အသေးစိတ် သိလိုသေးရင်တော့ www.talkster.com ကို သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် ခင်ဗျား။
မြန်မာများ ဆက်သွယ်ရေး လွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ကြပါစေ ခင်ဗျား။
Posted by ညီနေမင်း at 8:13 AM
Na Ga August 22, 2012 at 10:36 PM
ဆရာ Talkster call-in number ကဘယ်မှာ သွားကြည့်ရမှာလဲ မပေါ်ဘူးကော ကျေးဇူးပြု၍ ရှင်းပြပါလား ဆရာ အိမ်ကိုအရမ်းဆက်သွယ်ချင်လို့ပါ ..အိမ်ကိုဖုန်းခေါ်ရအောင်လဲငွေမရှိ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဆရာရဲ့လမ်းညွန်မှုကိုတွေ့လိုက်ရတော့အရမ်းဝမ်းသာတယ်..ဒါပေမယ့်ခေါ်စမ်းကြည့်တော့ဘာမှ ပြန်မပေါ်လာဘူး အဆင်မပြေဘူးပေါ့ ..ဆရာ ကူညီပါအုံး
Download လုပ်ပြီး movies ကြည့်ရအောင် ....
ဒီတစ်ခါ ဖုန်းကနေ ဂျီတော့ကို ဖရီးပြောနည်းလေးပေးမယ်
Run Box ထဲမှ တဆင့် သွားလို့ရသည့်နေရာများ (၂)
download AVG anti virus 8.0
html အကြောင်း မြန်မာလို လေ့လာရအောင် (၁)
ကျွန်ပြူတာ windows တက်တဲ့ အချိန်တွေတို. (သို့) lo...
Run ကနေတဆင့် သွားလို့ရတဲ့နေရာများ (၁)
docement တွေ folder တွေဖွင့်လိုက်တာနဲ့ background ...
မော်ဇီလာမှာ ဂျီတော့လေးတွေ ပေါင်းထည့်ခြင်း
Mouse မရှိတဲ့ အခါ Mouse အသုံးပြုသလိုမျိုး ကီးဘုတ်...
အဆင်သင့်ချိ်တ်ပေးထားတဲ့ links (၁)
ရင်ထဲကို ထိတဲ့ စကားလုံးလေးတွေ
သူ့အုပ်စုအလိုက် websites များ
blogger များအတွက် အထူးသီးသန့် websites များ
mobile phones ထဲသို့ Java Games များထည့်သွင်းခြင်း...
window xp တွင် စာများကို clear type ပြောင်းခြင်း